विपीको कांग्रेससँग मिले प्रकाशचन्द्र लोहनी, भट्टराईसँग ७ बुँदे सहमति ! - विपीको कांग्रेससँग मिले प्रकाशचन्द्र लोहनी, भट्टराईसँग ७ बुँदे सहमति !
विपीको कांग्रेससँग मिले प्रकाशचन्द्र लोहनी, भट्टराईसँग ७ बुँदे सहमति !
२०७५, ३० भदौ, 04:54:40 PM
काठमाडौ । प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रबादी र हरिबोल भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस वीपी बीच पार्टी एकता हुने भएको छ । दुई पार्टीबीच सैद्धान्तिक रुपमै एकता गर्ने सहमति भएको छ । सैद्धान्तिक सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दे एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले जनताका लागि नयाँ कम गर्न लागेको पार्टी एकता गर्न लागिएको बताए ।
दुई पार्टीबीच सैद्धान्तिक सहमती जुटाएका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई निकास दिन नसक्ने भएकाले दुईपार्टी बीचको एकताले केही नयाँ आश पलाएको बताए ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले देशको सीमाना सम्बन्धमा पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । बर्तमान सरकारले सीमानाका विषयमा ध्यान नदिँदा निशानछाप बाट कालापानी ,लिपुलेक लिम्पीयाधुरा गायब भएको बताए ।
उनले नेपालको कुल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलबाट ३ सय ७२ बर्गकिलोमिटर जमीन गायब भएको बताए । बरिष्ठ अधिबत्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राजसँस्था विकल्पको रुपमा रहन सक्ने भएपनि ज्ञानेन्द्र र पारशको पछि लागेर राजसँस्था फर्कन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले राजनीतिक पाटीलाई मात्र जन्माउनु भन्दा पनि अहिले सम्मको उपलब्धीलाई सँस्थागत गर्दै राष्ट्रिय रुपमा सामाजिक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले न्यायको आशा गर्नु बेकार रहेको उनको भनाई थियो । पूुर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले अहिलेको संविधान सम्झौताको दस्तबेज भएको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेका बताए ।
उनले इजरायलको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै इजरायलमा बैचारीक भिन्नता रहेपनि राष्ट्रिय मुद्धामा एक भएर उभिने गरे पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा डाक्टर जीवराज पोखरेल,जयराज आचार्य रमेश ढुंगेल लगायतले दुईपाटी बीचको एकता सम्बन्धि सैद्धान्तिक पत्रमाथी टिप्पणी गर्दै दुईपार्टी बीच एकता हुनु सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
सात बुँदै सैद्धान्तिक आधारपत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ती गर्न दुई दल बीचको एकतालाई अपरिहार्य मानिएको उल्लेख गरिएको छ ।